पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि नै यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ – ईमेची डटकम
पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि नै यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ
नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट धेरै महिलाहरुको ज्या*न गइसकेको छ । महिलामा हुने क्यान्सर र मध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सरलाई समयमै पहिचान गरी उपचार गरेमा यो रोग निदान गर्न सकिन्छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि नै पत्ता लगाउन सकिन्छ । पाठेघरमा सूक्ष्म जीवाणुको संक्रमणले क्यान्सर हुनसक्छ । यो जीवाणु यौ*न सम्पर्कबाट सर्दछ । पाठेघरको मुखमा संक्रमण भएपनि कुनै पनि लक्षण देखा नपर्न पनि सक्छ ।
क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउँने ?
पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडीको अवस्थामा पाठेघरको मुखको परीक्षण गरेर थाहा पाउन सकिन्छ । पाठेघरको मुखको परीक्षणलाई चिकित्सकको भाषामा भिजुअल इन्पेक्सन एसिटिक ए*सिड (भिआईए) परिक्षण भनिन्छ । भिआईए परीक्षण भनेको तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट पाठेघरको मुखमा औषधि लगाई गरिने परीक्षण हो ।
कस्तो महिलाले गराउने भिआईए परीक्षण ?
यौ*न सम्पर्क भएका ३० देखि ६० वर्ष उमेर भएका सबै महिलाहरुले समस्या नभएपनि प्रत्येक ५ वर्षमा एकपटक भिआईए परीक्षण गर्नुपर्छ ।
भिआईए परीक्षणका फाइदा यस्तो छ :
–भिआईए परीक्षणबाट पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनुभन्दा करीब १० वर्ष अगाडि नै अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ,
–पाठेघरमा क्यान्सर हुने वा नहुने जानकारी पाइन्छ,
–यो परीक्षण गर्दा शरीरमा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन,
–परीक्षणको क्रममा पाठेघरका समस्या देखिएमा समयमै थाहा पाइने भएकाले रोग लाग्नु अघि नै उपचार गर्न सहज हुन्छ,
–पाठेघरको क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ ।
यस्ता व्यक्तिमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम उच्च
डा. अन्जु श्रेष्ठ अंकोलोजी, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
पाठेघरको मुखमा असामान्य परिर्वतन भई सो स्थानको कोषमा अनावश्यक र अनियन्त्रित वृद्धि भइ घाउ, गिर्खा बन्नुलाई पाठेघरको क्यान्सर भनिन्छ । समयमा रोगको पहिचान र उपचार नभए यो रोग शरीरको अन्य भागमा पनि फैलिन सक्छ । जसका कारण मानिस मृ’त्युको मुखमा पुग्छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुयमन प्यापिलोमा भाइरसका कारणले हुन्छ । महिलाको प्रजनन् प्रणाली अत्यन्तै संवेदनशील, परिवर्तनशील भएकाले हर्मोन तथा रसायनहरूले तिव्र रुपमा प्रभाव पार्छन । यस्ता हर्मोन र रसायनका कारण पाठेघरको मुखको क्यान्सर बाहेका यो’नीद्वारको क्यान्सर र डिम्बाशयको क्यान्सर पनि हुनसक्छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरको कारण विशेष गरी यो क्यान्सर हुयमन प्यापिलोमा भाइरसका कारणले पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ । यो लामो समयसम्म संक्रमण भयो भने हुन्छ । यस्तै धेरै पुरुषसँग यौ’नसम्पर्क राखेमा पनि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
यस्ता व्यक्तिमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम
उच्च सानो उमेरमा विवाह गरेकालाई ।
सानो उमेरमा बच्चा जन्माएकालाई ।
धेरै बच्चा जन्माउने महिलालाई ।
एक भन्दा बढी पुरुषसँग यौ’न सम्पर्क राख्ने महिलालाई हुन्छ ।
धुम्रपान गर्ने महिलालाई ।
सुरुकै चरणमा यो रोगको लक्षण नदेखिन पनि सक्छ । तर केही व्यक्तिलाई यस्तो लक्षण पनि देखिनसक्छ ।
यौ’न सम्बन्ध राखेपछि रगत बग्ने ।
महिनावारी सुके पनि रगत देखा पर्ने ।
यो’नीबाट गनाउने सेतो पानी लगातार बग्ने ।
समय समयमा पाठेघरको मुखको पानी जाँच गर्ने ।
एचपीभी (डियनए) को जाँच गर्ने । जसबाट क्यान्सरको भाइरस छ वा छैन पत्ता लाग्छ ।
सुरुको अवस्थामा क्यान्सर भएमा अप्रेसन गरिन्छ ।
दोस्रो चरणमा भए किमोथेरापी र रेडियोथेरापी दिइन्छ ।
हुयमन प्यापिलोमा भाइरसको खोप लगाउने । बिरामीको दुखाई कम गर्न आवश्यक उपचार विधि अपनाउने ।